सरकारभन्दा पहिले पार्टी एकता | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सरकारभन्दा पहिले पार्टी एकता
सरकारभन्दा पहिले पार्टी एकता
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता, स्लाइड January 10, 2018	0 160 Views
पार्टी एकता गनेर् लक्षसहित संयुक्तरुपमा चुनावमा गएका एमाले र माओ वादी के न्द्रको वाम गठवन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभा निर्वाचनमा सो चे अनुसारकै नतिजा हात पारे का छन् । चुनाव सकिएको पनि महिना दिन बितिसक्यो, तर के न्द्रीय र प्रदे श सरकार निर्माण हुन सके का छै नन् । विभिन्न संवै धानिक अड्चन आएको भन्दै दलहरु दुबै नया“ सरकार निर्माणमा ढिलासुस् ती गरिरहे का छन् । त्यति मात्रै हो इन, एउटै चुनावी घो षणापत्र लिएर चुनावमा हो मिएका ने कपा एमाले र माओ वादी के न्द्रले चुनाव लगत्तै पार्टी एकताको कुरा पनि गरे का थिए तर त्यसको पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सके को दे खिदै न । यसै सन्दर्भमा सरकारको गतिविधि, वाम गठबन्धनको यो जना र पार्टी एकताका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस् य कृष्णबहादुर महरासग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । सम्पादक
प्रदे श मुकाम तो क्ने काम किन रो कियो ?
रो कियो भन्दा पनि ढिलासुस् ती भएको हो  । वास् तवमा प्रदे शको मुकाम तो क्ने जिम्मा चाहि“ प्रदे शसभाकै हो  । तर त्यो भन्दा पहिले सरकारले अस् थायी मुकाम तो क्नुपनेर् नै हुन्छ । प्रदे श प्रमुख नियुक्त गनेर् काम हुन्छ र मुकाम तो क्ने काम पनि के ही समयमै हुन्छ ।
अस्थायी तो क्न पनि समय लाग्ने हो ?
अस् थायी मुकामकै विषयमा जताकतै विवाद उठे को हुनाले यस् ता विवाद समाधानको को सिस भइराखे को छ । चाहना, अपे क्षा राख्ने कुरा त स् वाभाविक पनि हो  । तर वै ज्ञानिक, वस् तुगतढंगले तो क्ने विषयमा सरकार र खासगरे र प्रधानमन्त्रीले सो चिराख्नु भएको मै ले बुझे को छु । मे रो विचारमा यो विषयमा छिट्टै निर्णय हुन्छ ।
प्रदे श प्रमुखले के न्द्रबाटै प्रदे श चलाउने कुरा पो सुनिन्छ त ?
प्रदे श प्रमुखले शपथ लिने काम के न्द्रमा नै हुन्छ । तर उनले प्रदे शमै गएर काम गर्छन् । धे रै ठूलो विवाद भयो भने के न्द्रिकृत गनेर् कि भन्ने कुरा त के ही आएको छ, तर त्यो संघीयता बिरो धी कार्य भएकाले त्यतातिर जा“दै न । सातवटै ठाउ“मा मतदान पनि र प्रदे शसभा सदस् यको शपथ पनि सातवटै ठाउमा हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ । तर पनि राजनीतिक सहमति गरे र टुंगिने भएको ले मे रो विचारमा सहमतिको को सिस भइराखे को छ । सहमतिबाटै टुंगिन्छ ।
आन्दो लनकै डर मान्यो सरकारले ?
आन्दो लन, पार्टीभित्रै पनि मतभे द स् वाभाविकरुपले उठे का छन् । उठ्ने कुरा स् वाभाविक पनि हो  । त्यो आफ्नो ठाउमा छ“दै छ । किनकि चाहना अपे क्षा सबै को हुन्छ नै  । तर राजधानीजस् तै संवे दनशील चिजलाई मध्यबिन्दु पनि तो क्नुप¥यो , सुविधा पनि हुनुप¥यो , सुरक्षाको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुनुप¥यो , विकासका हिसाबले पनि ध्यान दिनुप¥यो । त्यसकारण यी सबै कुराहरुमा एउटै पक्षमात्रै हावी छै न । मान्छे हरुले त आ–आफ्नो ठाउ, आ–आफ्नो क्षे त्रमा हो स् भन्ने चाहना राख्ने नै भए । त्यसकारण चाहना भन्दा पनि वस् तुगत र वै ज्ञानिकरुपले निष्कर्ष निकाल्ने कुरा नै उचित हुन्छ । त्यो ठाउ“तिर गइरहे को छ स् िथति ।
निर्वाचन सकिएको पनि धे रै भइसक्यो अन्यौ लता लम्बिएन र ?
हो , अलिकति राजनीतिक अन्यौ लता पै दा भएको छ । तर चुनाव भइसके पछि राजनीतिक म्याण्डे ट जनताले जसलाई दिएका छन् त्यही दिशामा जान्छ दे श । के ही संवै धानिक, कानुनी समस् याहरु दे खाएर जुनखालको ढिलासुस् ती भइरहे को छ त्यो बे ठीक चिज हो । राजनीतिक मान्यताविपरीत चिज हो , तर पनि दे शमा कुनै समस् या र व्यवधान नआउने गरी अगाडि बढाउनका लागि के ही समय प्रतीक्षा गरे र भए पनि ठीकढंगले निकास निस् िकयो स् भन्ने चाहना अनुसारै कुरा भइराखे को छ । सरकारले छिटो भन्दा छिटो नया“ सरकार बनो स् भन्ने मै छ । हामी त्यो को सिसमा पनि लागे का छांै  ।
प्रदे श मुकामको लफडालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै ले कसरी टानेर् भन्ने हो ला है ?
राजनीतिकरुपमा पक्ष र विपक्ष त हुने नै भयो, त्यसलाई अस् वाभाविक मान्नुह“ुदै न । तर तथ्य त के हो भने राजनीतिक म्याण्डे ट चुनावले जसलाई दिएको छ, जनताले जसलाई दिए त्यो नै मुख्य कुरा हो  । त्यसलाई मान्नै पनेर् हुन्छ । अहिले को सरकारले पनि चुनावको परिणामलाई ग्रहण गरिसके को छ । तर के ही संवै धानिक त्रुटिहरु भएका छन् । जस् तो संविधानको मर्म के हो भने पहिले स् थानीय चुनाव, त्यसपछि प्रदे श र अनि प्रतिनिधिसभाको कल्पना गरे को थियो  । तर यसपटक हामीले समय अभावका कारणले प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभा एकै पटक ग¥यौ ं । त्यसकारण यस् तो समस् या दे खिएको हो  । त्यसलाई हल गर्नलाई अलिकति समय लागे को हो  ।
राष्ट्रियसभा चुनाव अगावै रो किएका काम हुन्छन् ?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ २४ गते हुने तो किसकिएको छ । अब कार्यक्रम घो षणा गर्न बा“की छ । चुनावी कार्यक्रम निर्वाचन आयो गले छिट्टै घो षणा गनेर् छ । त्यसपछि यी सबै कामहरु प्रदे श प्रमुखको कुरा र प्रदे श प्रमुख बस् ने अस् थायी मुकाम तो क्न जरुरी छ । किनभने प्रदे शसभाका ज्ये ष्ठ सदस् यहरुको शपथग्रहण गर्नुप¥यो , ज्ये ष्ठ सदस् यहरुले अरु सदस् यहरुलाई शपथ गराउनुप¥यो  । यी सबै काम माघ २४ अघि नै हुन्छन् ।
सरकारले गर्छ कि त्यसका लागि पनि सहमति खो ज्नुपर्छ ?
सरकारले सहमति खो ज्ने को सिस गर्छ ।
यहींकै प्रतिनिधि भएकाले दाङ प्रदे श मुकाम हुन्छ ?
मै ले धे रै पहिले दे खि नै भन्ने गरे को छु । प्रदे शको मुकाम बनाउने कुरामा दाङको विकल्पै छै न हरे क दृष्टिको णले  । कर्णालीको किनारमा रहे को राजापुरदे खि नवलपरासीसम्म रहे को जनमत कहा“ छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो इन । कर्णाली छे उको राजापुरका मान्छे हरुले एउटा तर्क राखे का छन कि बुटवल जानुभन्दा त धनगढी वा सुखेर् त जान धे रै सहज हुन्छ भने र । त्यसकारण त्यो सत्यतालाई मध्यनजर गरे र दाङ नै एउटा मध्यबिन्दु हो  । फे रि संवे दनशीलताको दृष्टिको णले पनि दाङ धे रै सुरक्षित छ । स्थानको दृष्टिले पनि पर्याप्त छ । त्यसकारणले दाङ राजधानीको मै ले विकल्पै दे ख्दिन ।
नया सरकार कहिले सम्म बन्ला ?
मे रो विचारमा फागुनको पहिलो हप्तासम्म सरकार बन्ने दे खे को छु । राष्ट्रियसभाको चुनावलगत्तै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम आउने छ र त्यसपछि सरकार बन्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा चुनावअघि सरकार बन्नै नसक्ने हो र ?
सरकार बनाउने दायित्व त प्रतिनिधिसभाकै हो  । राजनीतिक दृष्टिको णले हो भने प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गरे र प्रतिनिधिसभामार्फत सरकार बनाउन सकिन्थ्यो  । सम्भावना नै नभएको भन्ने हो इन, छ । यो कानुनी र संवै धानिक जटिलता भन्दा राजनीतिक कुरालाई मुख्य माने र जाने र त्यो आ“ट ग¥यो भने त्यो हुन्छ ।
सरकार पहिले कि पार्टी एकता ?
पार्टी एकताको त विकल्प नै छै न । पार्टी एकता हुन्छ नै ग्यारे न्टी नै छ । पार्टी एकता गर्न नचाहने के ही शक्तिहरु पनि हो लान् । छिटो भन्दा छिटो पार्टी एकता हुन्छ । किनभने जनमतले पार्टी एकता अनुमो दन गरिसके को छ । कसै को चाहनाले यो रो किदै न । पार्टी एकताको शुरुवात भइसके को छ मे रो विचारमा नया“ सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै पार्टी एकता हुने सम्भावना बढी छ ।
ने ता र कार्यकर्ता व्यवस् थापन कसरी हुन्छ ?
पार्टी एकता संयो जन समिति बने को छ । त्यसले आफ्नो काम गरिरहे को छ । दुईवटा पार्टी अलग–अलग हिसावले लामो समयसम्म चले को हुनाले यसका वै चारिक विषय, राजनीतिक विषय, के ही संगठनात्मक विषय छन् । कतिपय कुरा महाधिवे शनले टुंग्याउला । कतिपय तत्काल गर्नुपनेर् कुरा पनि हो लान् । मुख्य ने ताहरुको व्यवस् थापन टुंगिएपछि सबै टुंगिन्छ ।
भागवण्डाले समस् या पारे को त हो इन ?
पार्टी एकता भने को सजिलै हुदै न । यसमा जटिलता पनि हुन्छ । भागबण्डा भन्ने त हो इन तर दुई पार्टीलाई व्यवस् थापन गनेर् भन्ने कुराचाहि“ हो नि । कसै लाई व्यवस् थापन नै नगरी त सम्भव हुदै न । त्यसकारण विचारमा, राजनीतिमा, संगठनमा अलिकति ले नदे न, अलिकति अपग्रे ड गनेर् कुरा हो  । मूल कुरा आ–आफ्ना पुरानो ठाउलाई भत्काउने र नया“ ठाउ“मा उभिने को सिस ग¥यो भने सम्भव छ । वास् तवमा दुबै पार्टीका ने ताहरु तयार हुनुहुन्छ । त्यसकारण यस् ता समस् या फे रि धे रै जटिल भएर आउ“छ जस् तो मलाई लाग्दै न ।
व्यवस् थापन गर्दा चुनावमा जादाको जस् तै मापदण्ड अख्तियार गरे र अघि बढ्ने हो कि कस्तो ?
त्यो त पार्टी एकता संयो जन समितिको बै ठकले तय गनेर् छ । त्यही हुन्छ भन्ने छै न । नया“ढंगले परिभाषित गरे र अघि बढ्न पनि सकिन्छ ।
चुनावी घो षणापत्र भन्दा के ही फरक छन् दाङको विकासका लागि ?
मै ले दाङको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घो षणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जाहे र गरिसके को पनि छु भने के न्द्रमा पनि संयुक्त घो षणापत्र जारी गरिएको छ । यी दुबै घो षणापत्रलाई आधार बनाएर नै दाङको विकासमा लाग्ने छु । अकोर् कुरा चुनावी घरदै लो का क्रममा पनि जनताले थुप्रै विकासका कुरा ल्याउनुभएको छ र मै ले भो लि (बुधवार) पनि ने कपा माओ वादी के न्द्रका अगुवा कार्यकर्ताहरुस“ग छलफल गदैर् छु । यी सबै ठाउ“बाट आएका सुझावलाई समे त थप गरे र विकासका काम गनेर् यो जनामा म छु । यसै गरी नया“ सरकार बन्नुभन्दा अघि गाउ“–गाउ“मा पुग्ने र त्यहा“का समस् याहरु बुझने , संकलन गनेर् काम गरिरहे को छु । खासगरी मे रो निर्वाचन क्षे त्रको प्रो फाइल तयार गरे र सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदे श सरकार, स् थानीय सरकार र के न्द्रको सरकारले कहा“ कसरी के भूमिका खे ल्न सक्छ त्यो सबै कुरालाई समे टे र ठो स अभियान नै सञ्चालन गनेर् तयारी भइरहे को छ । त्यो भन्दा अघि राष्ट्रियरुपमा मात्रै हो इन अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि दाङको विकासका लागि प्रारम्भिक कुराहरु गरे को छु सबै पक्षहरुस“ग । त्यसकारण कामको शुरुवात अब नया“ सरकार बने स“गै हुन्छ । त्यहा“ नपुग्दासम्म एकखालको राजनीतिक संक्रमण नै छ ।
समग्र दाङको विकासका लागि के सो च्नु भएको छ ?
यो या त्यो भने र तो क्ने भन्दा पनि झण्डै दुई वर्ष रो किएको जहाजको उडान भर्खरै शुरुवात भएको छ । यसलाई निरन्तर गनेर् कुरा मै ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे को छु । यहा“का साथीहरुस“ग खासगरी एमाले का साथीहरु, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मे यर, माओ वादी के न्द्रका अग्रज साथीहरुस“ग कुरा भइराखे कै छ । जहाजको व्यवस् थापन टिमस“ग पनि कुरा भइरहे कै छ कि यसलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भने र । अहिले पनि हप्तामा दुईपटक आउ“छ नै  । एउटा जहाज नै नियमितरुपमा चलो स् भन्ने हिसाबले मै ले कुरा राखे को छु । दुई महिनापछि स् थायी जहाज पनि आउ“दै छ बाहिरबाट । त्यो बाहे क मै ले प्रतिबद्धतामा उल्ले ख गरे का स् वास् थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पूर्वाधार, खाने पानीलगायतका यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गदैर् दाङ विकासको हब बनो स् भन्ने कल्पना गरे को छु । त्यसको निम्ति यो जना पनि बनाउ“दै छु मै ले  ।
अन्त्यमा, मुकामकै कुरामा दङालीहरुको चासो छ । के ही भन्नु छ ?
मुकामका लागि दाङको विकल्प छै न । विकासको ढो का यहाबाट नै खुल्छ । त्यसको निम्ति म अधिकतम लागे को छु । त्यस अलावा हामीले फे रि सवै कुरा त्यो मात्रै हो भन्ने कुरा पनि हो इन । अरु धे रै कुरा पनि छन् । मुकाम भएन भने सकियो भन्ने कुरा पनि गलत कुरा हो  । त्यसकारणले अरु कुरामा पनि जनताको उत्साह, जनताको सहभागिता उत्तिकै जरुरत छ । त्यसै ले ढुक्क हुन जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु । साथसाथै अन्य कुरामा पनि सक्रिय सहभागिताको अपे क्षा मे रो छ ।
Previous: गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षाशाला हुने
Next: घोराहीमा बजार व्यवस्थापन कार्यविधि पारित,कालो सूचीदे खि से वा रो क्कासम्मका कारवाही